A Yakasarudzika Bhizinesi Kadhi ... er Chip | Martech Zone
Mugovera, January 5, 2013 Mugovera, January 5, 2013 Douglas Karr
Masikati ano, ndanga ndiine musangano wakanaka neyedu mubatsiri wezve bhizinesi Harry Howe uye vedu bhizinesi inishuwarenzi mumiriri, Joe Glaser. Wakave musangano wakanaka nekuti Joe naHarry vane hunyanzvi hwekudhirowa pasi pese panjodzi yenjodzi uye inishuwarenzi mumusangano wakaomarara kwavanonyatsondiudza zvandinofanira kuita uye ndinovimba kuti vazviite.
Tinotakura inishuwarenzi nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka… ingave kuba midziyo kana kukuvara, kumhan'arirwa, inishuwarenzi yekufamba, inishuwarenzi yeupenyu, nezvimwe. Muchokwadi, vamwe vevatengi vebhizinesi vatakada kuti titore huwandu hushoma hweinishuwarenzi yebhizinesi kuchengetedza zvese kambani yavo neyedu. Bhizinesi diki saizi yedu inogona kuvigwa nyore nyore mune imwe inouraya swoop kana isu tisina inishuwarenzi… saka tinodzivirira njodzi uye kubhadhara bhiri gore rega rega.
Ndiri fan hombe yemakadhi emabhizimusi akasarudzika uye Joe akaburitsa kambani yake ichangoburwa uye yakakurisa yandaifunga kuti yaive yakasarudzika uye yakakodzera kutaura nezvayo Iyo chaiyo poker chip ine ruzivo rwekambani kune rumwe rutivi uye ruzivo rwekuonana kwaJoe kune rumwe rutivi. Poker chip ... yemumiriri weinishuwarenzi… inokosha!
PS: Kana iwe uri Indiana-based kambani uye uchida zano rakasimba, ini ndinokurudzira zvikuru Joe Glaser uye iyo Thompson Boka. Mupe runhare pa317.514.7520.
Tags: bhizinesi kadhibhizinesi kadhi poker chipinishuwarenzi yebhizinesijoe glaserPoker chipthompson boka
Sevha $ 50 pane Yako YekushambadziraProfs PRO Nhengo